Uhlalutyo lwe-iPhone 13 Pro Max: yintoni etshintshile | IPhone iindaba
ULuis Padilla | 27/09/2021 19:15 | iPhone 13, Ezahlukeneyo
I-iPhone 13 ilapha, kwaye nangona ngobuhle zonke iimodeli zifana kakhulu nabandulelayo, ziphantse zafana, utshintsho oluziswa zezi fowuni zintsha lubalulekile kwaye sikuxelela apha.
I-smartphone entsha ye-Apple ilapha, kwaye kulo nyaka kulapho utshintsho lwenzeka ngaphakathi. Ngokwe-aesthetically kungakhokelela ekucingeni ukuba sijamelene ne-smartphone efanayo, nangona kukho nezinye izinto ezincinci ekufuneka sizithathele ingqalelo, kodwa utshintsho ikakhulu kwi "ngaphakathi". Musa ukudideka nembonakalo yangaphandle, kuba iindaba zichaphazela ezo ndawo zibalulekileyo zefowuni njengescreen, ibhetri kunye nekhamera, ngakumbi ikhamera. Kulo nyaka uhlalutyo lwethu lwe-iPhone 13 Pro Max igxile kolu phuculo ukuze wazi ukuba le nto ikunika ntoni.
2 Umboniso we-120Hz
3 Ibhetri engenakoyiswa
4 Iifoto ezingcono, ngakumbi ekukhanyeni okuphantsi
5 IproRes yeVidiyo kunye neMowudi yeCinema
6 Utshintsho olubaluleke kakhulu
I-Apple igcine uyilo olufanayo lwe-iPhone 12 ye-iPhone 13, ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba abaninzi bathethe malunga ne-iPhone 12s. Iingxoxo ezingenangqondo ecaleni, kuyinyani ukuba ifowuni entsha kunzima ukwahlula ngeliso lenyama kuleya yasungulwa kunyaka ophelileyo, kunye nemiphetho yayo ethe tye, isikrini sayo esicaba ngokupheleleyo kunye nemodyuli yekhamera eneelensi ezintathu ezibekwe kulungelelwaniso olunxantathu . Kukho umbala omtsha, iSierra Blue, Kwaye imibala emithathu yeklasikhi igcinwa: igolide, isilivere kunye negraphite, eyokugqibela yile siyibonisayo kweli nqaku.
Ubume beqhosha, ukutshintsha kwesimungulu, kunye nesihlanganisi sombane phakathi kwesithethi kunye nemakrofoni ziyafana. Ubungakanani be-terminal bonyuswe kancinci (i-0,02cm ngaphezulu kwe-iPhone 12 Pro Max) kunye nobunzima bayo (i-12 yeegram ngaphezulu kwe-238 yeegram). Olu lutshintsho olungenakuthelekiswa nanto xa unayo. Ukuxhathisa kwamanzi (IP68) nako kuhlala kungatshintshanga.
Ewe kubekho ukuphucuka kwiprosesa ephetheyo, i-A15 Bionic entsha, enamandla ngakumbi nefanelekileyo kune-A14 Bionic ye-iPhone 12. Ayizukuba yinto oza kuyiphawula nokuba, kuba iprosesa "endala" isasebenza ngokulula kakhulu kwaye ingaphezulu kokwaneleyo ekusebenziseni usetyenziso okanye imidlalo, kwaneyona inzima. I-RAM, engazange icaciswe ngu-Apple, ihlala ingatshintshanga nge-6GB yayo. Ukhetho lokugcina luqala kwi-128GB, efanayo nakunyaka ophelileyo, kodwa kulo nyaka sinemodeli entsha "ephezulu" efikelela kwi-1TB yomthamo, into eya kuba nomdla ezimbalwa ngenxa yexabiso layo kwaye ngenxa yokuba ingeyomfuneko uninzi lwabasebenzisi.
U-Apple uyibize ngokuba yi-Super Retina XDR Display Pro Motion. Emva kweli gama lithandekayo sinesikrini esihle se-OLED esigcina ubungakanani obufanayo be-6,7 ”, ngesisombululo esifanayo kodwa oko kubandakanya ukuphucuka esele silinde ixesha elide: inqanaba lokuhlaziya le-120Hz. Oku kuthetha ukuba oopopayi kunye notshintsho luya kuba lulwelo ngakumbi. Ingxaki ejongene nayo le screen intsha kukuba oopopayi kwi-iOS sele benciphile kakhulu, ke xa beqala ukujonga banokungaboni kakhulu, kodwa kuyabonisa, ngakumbi xa kuvulwa isixhobo kunye nazo zonke ii icon "ezibhabha" kwi desktop yefowuni yakho.
I-Apple izise isikrini sayo sePro Motion (yile nto ayibiza ngokuba yi-120Hz) kwi-iPhone, abanye baya kucinga ukuba yayilixesha, kodwa ikwenzile ngendlela elula engachaphazeli nje indlela osibona ngayo isikrini kodwa ikwabandakanya kakhulu ngokuqinisekileyo kumagubu. Izinga lokuhlaziya kwesi sikrini liyahluka ukusuka kwi-10Hz xa kungasadingeki (umzekelo xa ujonga ifoto emileyo) ukuya kwi-120Hz xa kukho imfuneko (xa uskrola kwiwebhu, kwiimifanekiso, njl.. Ukuba i-iPhone yayihlala ine-120Hz, ukongeza ekubeni ayiyomfuneko, ukuzimela kwesiphelo kuya kuncitshiswa kakhulu, ke iApple ikhethe olu lawulo lutshintsho oluyahluka ngokuxhomekeka kwiimfuno zomzuzu, kwaye iyimpumelelo.
Kubekho utshintsho abaninzi bethu abalulindeleyo: ubungakanani benotshi buncitshisiwe. Ukulungiselela le nto, iseti yentloko ihanjisiwe yaya phezulu, kanye kumda wesikrini, kwaye ubungakanani bemodyuli yokwamkelwa kobuso incitshisiwe. Umahluko awukho mkhulu, kodwa uyaphawuleka, nangona ungasetyenziswanga (ubuncinci okwangoku). I-Apple ibinokuthi (kufanele) ukuba ikhethe ukongeza enye into kwibar yomgangatho, kodwa inyani kukuba uyaqhubeka okanye ubone ii icon ezifanayo kwibhetri, i-WiFi, ukugubungela ixesha kunye neenkonzo ezininzi zeendawo. Asinakongeza ipesenti yebhetri, umzekelo. Indawo echithiweyo esiza kubona ukuba ukulungiswa kwexesha elizayo kuyalungiswa.
Utshintsho lokugqibela kwiscreen alubonakali kangako: ukuqaqamba okuqhelekileyo kweenithi ezili-1000, Xa kuthelekiswa ne-800 nits yezinye iimodeli zangaphambili, ukugcina ukukhanya okuphezulu kwe-1200 nits xa ujonga umxholo we-HDR. Andiluboni utshintsho xa ndibona isikrini emini emini esitratweni, isabonakala intle kakhulu, njengale ikwi-iPhone 12 Pro Max.
U-Apple ukufezekisile oko kubonakala kunzima ukufezekisa, ukuba ibhetri egqwesileyo ye-iPhone 12 Pro Max iphuculwe kakhulu yile ye-iPhone 13 Pro Max. Isiphoso esininzi siscreen, kunye nenqanaba lokuhlaziya elinamandla endikuxelele lona ngaphambili, iprosesa entsha ye-A15 ikwachaphazela, isebenze ngakumbi njengonyaka, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo eyona nto yahlulahlula ibhetri enkulu. IPhone 13 Pro Max entsha inebhetri enomthamo we-4.352mAh, xa kuthelekiswa ne-3.687mAh ye-iPhone 12 Pro Max. Zonke iimodeli zalo nyaka zibona ukwanda kwebhetri, kodwa eyona ifumene ukonyuka yeyona inkulu kusapho.
Ukuba i-iPhone 12 Pro Max yayikuPhezulu lokuzimela, ibetha iiterminal zokhuphiswano ngeebhetri ezinkulu, le iPhone 13 Pro Max izakuseta ibar ephezulu kakhulu. Ndine-iPhone entsha ezandleni zam ixesha elifutshane kakhulu, lide ngokwaneleyo ukuba ndiyibone Ndifika esiphelweni sosuku ndinebhetri eninzi ngakumbi kunangaphambili. Ndidinga ukuyivavanya ngezo ntsuku zifunwayo apho i-12 Pro Max ingafikanga esiphelweni sosuku ngenxa yokusetyenziswa kakhulu, kodwa kujongeka ngathi le Pro 13 Max izakubamba ngokugqibeleleyo.
Iifoto ezingcono, ngakumbi ekukhanyeni okuphantsi
Nditshilo ekuqaleni, apho iApple ibeke khona okunye bekukho kwikhamera. Le modyuli inkulu ethintela amaqweqwe alo nyaka uphelileyo ekubeni asikhonze kulo nyaka ngaphezulu kokuhlawula oku kungahambi kakuhle. I-Apple iphucule iilensi zekhamera ezintathu, i-telephoto, i-angle engile, kunye ne-engile ebanzi. Izinzwa ezinkulu, iipikseli ezinkulu kunye nokuvula okukhulu kwezi zimbini zokugqibela, kunye nokusondeza okusuka kwi-2,5x ukuya kwi-3x. Iguqulela ntoni le nto? Apho sifumana khona iifoto ezingcono, ezibonakala ngakumbi ekukhanyeni okuphantsi. Ikhamera kwi-iPhone 13 Pro Max iphucule kakhulu ekukhanyeni okuphantsi kangangokuba kukho amaxesha apho imo yasebusuku itsibela kwi-iPhone 12 Pro Max hayi kwi-iPhone 13 Pro Max, kuba awuyidingi. Ngendlela, ngoku zontathu iilensi zivumela imo yasebusuku.
I-Apple ikwabandakanya into entsha ebizwa ngokuba yi "Izimbo zeefoto". Ukukhathala kwe-iPhone ukufaka iifoto "ezicaba"? Ewe ngoku ungatshintsha indlela eziphatha ngayo ikhamera yefowuni yakho, ukuze ithathe iifoto ngokungafaniyo okuphezulu, okuqaqambileyo, okufudumeleyo okanye okubandayo. Izitayile zichazwe kwangaphambili, kodwa ungaziguqula ngendlela othanda ngayo, kwaye nje ukuba usete isitayile iya kuhlala ikhethiwe de uyitshintshe kwakhona. Ezi profayile azinakusetyenziswa ukuba ufota iifomathi kwifomathi yeRAW. Kwaye ekugqibeleni Imowudi yeMacro, ekhathalela i-engile ebanzi, ekuvumela ukuba uthathe imifanekiso yezinto ezibekwe ziisentimitha ezi-2 ukusuka kwikhamera. Yinto eyenzeka ngokuzenzekelayo xa usondela, kwaye nangona ekuqaleni bendicinga ukuba ayizukunika lukhulu, inyani kukuba ikushiya nemifanekiso nje emikhulu.
Inye kuphela into endingayithandiyo malunga nolu tshintsho kwikhamera: ukwanda kocingo lwefowuni. Yilensi eqhelekileyo esetyenziselwa imo ye-portrait, kunye Ndikuthandile ukuba ne-2,5x zoom ngcono kune-3x entsha kuba kuya kufuneka ndizonge ngakumbi ukufumana ezinye iifoto, kwaye ngamanye amaxesha akunakwenzeka. Iya kuba ngumcimbi wokuwuqhela.
Iifoto zohlelo lokusebenza lweefoto ngemowudi yeMacro
IproRes yeVidiyo kunye neMowudi yeCinema
I-iPhone ibisoloko iphezulu xa kuziwa ekurekhodweni kwevidiyo. Lonke utshintsho lwekhamera endiluthethileyo kwiifoto lubonakala kwirekhodi yevidiyo, njengoko kucacile, kodwa neApple yongeze izinto ezimbini ezintsha, enye eya kuchaphazela uninzi lwabasebenzisi, kwaye enye eya kuthi inike ewe , ngokuqinisekileyo. Eyokuqala kukurekhoda ProRes, ikhowudi efana ne "RAW" ifomathi apho iingcali ziya kuba nakho ukuhlela ividiyo nayo yonke ingcaciso eyibandakanyayo, kodwa loo nto ayifanele kuchaphazela umsebenzisi oqhelekileyo kwaphela. Ngapha koko, into echaphazelayo kukuba umzuzu omnye ProRes 1K uhlala kwi-4GB yendawo, ke ukuba awuyidingi, kungcono uyishiye ikhubazekile.
Imowudi yeCinematic imnandi kakhulu, kwaye ngokulungiselela kunye noqeqesho oluncinci, iya kukunika iziphumo ezilungileyo. Ifana nemowudi yePortrait kodwa kwividiyo, nangona ukusebenza kwayo kwahlukile. Xa usebenzisa le ndlela, ukurekhodwa kwevidiyo kunqunyelwe kwi-1080p 30fps, kwaye ekubuyiseleni into oyifumanayo kukuba ividiyo ijolise kwisifundo esiphambili kwaye ifiphalise konke okunye. I-iPhon yenza oku ngokuzenzekelayo, igxile kumbukeli, kwaye iyatshintsha kuxhomekeke ekubeni izinto ezintsha zingena kwinqwelomoya. Ungayenza ngesandla ngelixa urekhoda, okanye kamva ngokuhlela ividiyo kwi-iPhone yakho. Ineziphene zayo, kwaye kufanele ukuba iphuculwe, kodwa kufuneka iqatshelwe ukuba iyonwabisa kwaye inikezela ngeziphumo ezibi kakhulu.
Utshintsho olubaluleke kakhulu
IPhone 13 Pro Max entsha ibonisa utshintsho olubaluleke kakhulu xa kuthelekiswa nesizukulwana esidlulileyo kwimicimbi efanelekileyo kwifowuni njengebhetri, isikrini kunye nekhamera. Kule nto kufuneka kongezwe utshintsho lwayo yonke iminyaka, kunye neprosesa entsha ye-A15 Bionic eya kuthi ibethe yonke imigangatho apho kwaye ibekhona. Kuya kubonakala ngathi uphethe i-iPhone efanayo esandleni sakho, kodwa inyani kukuba le iPhone 13 Pro Max yahluke kakhulu, nokuba abanye abaqapheli. Ukuba leyo yingxaki kuwe, kuya kufuneka ulinde utshintsho kuyilo kunyaka olandelayo, kodwa ukuba ufuna ukuba ne-iPhone ibengcono kakhulu kunangaphambili, utshintsho luyacaca.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iifowuni zePhone » iPhone 13 » Uhlalutyo lwe-iPhone 13 Pro Max: yintoni etshintshile kwifowuni entsha ye-Apple
Ukuthatha iifoto ezinje ngezi zimbini ii-iPhones ecaleni uye ngokungazi uphumelele iifoto ze-3D ezi-stereoscopic. Bendihleli ndithatha zonke iifoto zam kwi-3D iminyaka, kwaye enye yeendlela kukusebenzisa iikhamera ezimbini, enye ineselfowuni enye okanye ikhamera enye yokuthatha iifoto ezimbini iisentimitha ezimbalwa ngaphandle ngokungathi ubeke enye ecaleni kwayo - Isebenza kuphela kwimimandla ekungekho ntshukumo kuyo, okanye enye indlela isebenzisa i3DMovieCam, esebenzisa iilensi ezimbini ze-iPhone ezihambelanayo (kwipro yesiqhelo kunye nokusondeza, kwi-12 ne-11 ezingekho pro Ngokwesiqhelo le App yokugqibela ikuvumela ukuba urekhode ividiyo kwi-3D ...